Maamulka Hirshabelle oo War cad ka soo Saaray Arimaha Doorashoyinka Dalka ka dhici doona | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maamulka Hirshabelle oo War cad ka soo Saaray Arimaha Doorashoyinka Dalka...
Maamulka Hirshabelle oo War cad ka soo Saaray Arimaha Doorashoyinka Dalka ka dhici doona
Jawhar (Halqaran.com)- Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa Maanta waxa ay warsaxaafadeed ka soo saareen, arrimaha ku aadan doorashooyinka dalka lagu qaban doono sanadka nagu soo food leh ee 2020/2021.
Warsaxaafadeedka oo ka koobnaa ayaa waxaa lagu cadeeyay ilaa Lix (6) qodob oo waa weyn, waxaana ka mid ahaa in mamulka Hirshabeelle uusan aqbali doonin muda kororsiga ay doonayso xukuumadda Soomaaliya sida hadal ka ay u dhigeen Maamulka Hirshabelle.
Sido kale waxay warsaxaafadeed ayaa waxaa lagu xusay in Maamulka Hirshabelle uu doonayo in ay dalka ay ka dhacdo doorsho hal qof iyo cod ah sida balankuba ahaa mar kii hore.
warkaan ka soo yeeray Maamulka Hirshabelle ayaa waxaa uu ku soo aadaya, xilli maanta magaalada Jowhar ee Caasimada ku meelgaarka ah ee Hirshabelle, ayaa waxaa kullan ku dhaxmaray, madax ka socota Beesha Caalamka iyo madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare,kullan ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo ay ka mid tahay doorshooyinka dalka uu gali doono Sanad ka 2020/2021.
Hoos Ka Akhriso Warsaxaafadeedka Oo Dhammaystiran:-
Maamulka HirShabeelle oo war ka soo saaray arimaha doorashooyinka dalka